PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: April 2015
စစ်တခုလုံး Theater of War ကို ခြုံ ပြီး ပြောရရင် တော့ ကိုးကန့် က အသာစီးရနေတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ရှုံး ပြီး ကိုးကန့် နိင်တယ်လုို့ကောက်ချက်ချနိင်ပါတယ်။
ဒီလုိုရရတဲ့အကြောင်းကတော့ ပရပ်ရှား စစ်ပါရဂူ ကလေ့စ်ဝစ် က '' Defense in stronger than attack '' ခံစစ်က ထုိုးစစ်ထက် ပြင်းထန်တယ် ဆိုတဲ့ သီအိုရ ကို ကိုယ်တိုင်စစ်ကိုဦးစီးတိုက်ခဲ့ဘူးသူတိုင်းသိနိင်ကြပါတယ်။
ကိုးကန့် က ခံစစ် နေရာယူထားတယ်။ မြန်မာ့တပ်က ထိုးစစ် ဆင် ရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။ ထုိုးစစ်က တော်တော်လေး ဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ရိုက် ချဉ်းကပ်မှု Direct Approach ဖြစ်နေပါတယ်။
အဆိုးဆုံးတခုကတော့ ကိုးကန့် နယ်မြေကို မြန်မာစစ်တပ်က ကျူးကျော်သူလုို့ ဖြစ်နေတယ်။ အခွံပဲကျန်ခဲ့တဲ့ လောက်ကိုင် မြို့ ကိုကြည့်ရင် မြန်မာ စစ်တပ်ဟာ ကိုးကန် လူထုရဲ့ ထောက်ခံ ကူညီမှု လုံးဝ မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကို ပြနေတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလဲ သူ နဂိုဗီဇ ခိုးဆိုးခါး အကျင့် အတိုင်း ပဲ သူခိုးတပ်ကြီးလုို့ဖြစ်နေပြီး ပရောဖက်ရှင် နယ် စစ်တပ် တခုလို ပြုမှုနိင်စွမ်းမရှိသလုိုဖြစ်နေပါတယ်။
ရုရှား ပညာတော်သင်ပြန် ဗိုလ်မှုး စိုင်းသိန်းဝင်း က '' တိုက်ပွဲကျတဲ့ မြန်မာစစ်သည်တွေကိုယ်ပေါ်မှာ သာမန်တပ်သားတဦး မပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ အရပ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ တွေ့ရတာပဲ။ ခိုးထုပ်ခိုးထည်နဲ့ မိတယ်လို့ ဆိုမလား။ တိုက်ရာပါပစ္စည်းနှင့်တကွ အသေဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ပြောမလား။ ''
လို့ စစ်သားတွေက စစ်သားနဲ့မတူတော့ အကျင့်စာရိုက်နဲ့စည်းကမ်း ယိုယွင်းမှုတွေကို ထောက်ပြထားတယ်။
နည်း ဗျူဟာ ပိုင်းမှာလဲ တော်တော်လေး အားနည်း ချက်ရှိတဲ့
ပုံပေါ်လွင်နေတယ်။ ဥပမာ - မြန်မာ စစ်သားတွေဝင်လာတာကို ကိုးကန့် အဖွဲ့က ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပါယ်ကတော့ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ reconnaissance လုပ်နိင်စွမ်းရည်မရှိတာကို ပြနေတယ်။စစ်သားတွေ ရဲ့mobility နဲ့မတူပဲ ကျိုက်ထီးရိုးအထမ်းသမားတွေရဲ့သွားလာပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ စကားတပြောပြောနဲ့အေးအေးလူလူ သွားနေကြပုံရှိတယ်။ ရုတ်တရက် ambush
လုပ်လာရင် ခြင်းတောင်းကြီးတွေနဲ့ဘယ်လုို နေရာယူမလဲ။ ဘယ်လုို့ counter attack
လုပ်နိင်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစား ကြည့်နိင်ပါတယ်။ စစ်သားတွေလက်ထဲမှာ Gun Fire ပြန်လုပ်ဖုို့လက်နက်ကိုအသင့်ကိုင်ထားတောင်မရှိကြဘူး ။ ခြင်းတောင်းတွေမှာ ရောင်စုံ ပလပ်စတိတ် အိပ်တွေ ပလပ်စတိတ်ဖျာ တွေက အဝေးက ရန်သူကို Easy target လာပါ လုို့ လက်ရပ် ခေါ်နေသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။
တကယ်က သူတို့အထက်အရာရှိတွေက သူတို့ ကို သတင်း မှားတွေ ပေးလုိုက်ပုံရှိတယ်။ ဥပမာ ကိုးကန့် ဆိုတာ ဘိန်းစားတွေ ၊ တရုပ်တွေ သေနပ်သံကြားတာနဲ့ ထွက်ပြေးမဲ့ ကောင်တွေကို မြှောက်ပေးလုိုက်ပုံရှိတယ်။ ဒို့ ဗမာ တပ်မတော်ကသာ စစ်တိုက်စွမ်းရည်ရှိတယ်လုို့ တဖက်သတ် ၀ါဒ ဖြန့်ပေးလုိုက်ပုံရှိတယ်။
ကရင် ပြည်နယ်မှာလာတိုက်တုံးက ကရင် တွေမှာ ဖါးပြစ်တဲ့သေနပ်ပဲရှိတယ်လုို့စစ်သားတွေကို သတင်းမှားပေးခဲ့ကြတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့စစ်သုံပန်းတွေ ပြောပြချက်အရ သိရတဲ့ စကားတွေဖြစ်ပါတယ်။
အခုလဲ ကိုးကန့် အဖွ့ဲ က ဓါတ်ပုံ သေချာ ရိုက်ပြီးမှာ တော့ Sniper ပါနဲ့ပြစ် ဖုို့ မခဲ ယဉ်းတော့ပေဘူး။ စစ်သားတွေသေ နေတဲ့ ပုံတွေကြည့်ရင်လဲ တော်တော်ညံတဲ့ စစ်ဗျူဟာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေါ်လွင် နေတယ်။ ဥပမာ concealing conducting မရှိဘူး ။ ရှိုဘေးမှာ တယောက်၊ လမ်းဘေးမှာ ယောက်၊ ရေ တိုင်ကီ နားမှာ တယောက် သေနေတာတွေက တယောက် တပေါက် ဖြစ်နေကြတယ်။ စစ်သားတွေဟာ Combatants position လုံးဝ မရှိတာကို ပြနေတယ်။
ကိုးကန့် အဖွဲ့ က သိမ်းပိုက်မိတဲ့လက်နက်တွေ ကိုကြည့်ရင် လက်နက်ကြီး ကျည်တွေကိုပါ
တွေ့ နေရတယ်။ အဓိပါယ်ကတော့ တပ်ရင်းလုိုက် တပ်ခွဲလုိုက် ပြုတ်သွားတဲ့သဘောမှာရှိနေပါတယ်။
ကိုးကန့် တိုက်ပွဲက မန ပုလော တိုက်ပွဲရဲ့၁၀ ပုံတပုံတောင်မရှိသေးဘူး။ မနပုလောတိုက်ပွဲမှာ စစ်သား ၃ ထောင် လောက်ကျတယ်။ သုံးထောက်ကျတယ်ဆိုတာ ဦးသန်းရွှေက တပ်မတော်နေ့ အခန်းနားတခုမှာ တရားဝင် ၀ံခန် ထားတဲ့ သေဆုံးမှု ပါ။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ
မဲသဝေါ တခွက် လုို့တောင် အရပ်စကားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဓိပါယ် အချို ကျ ကျ ( စစ်တပ်က ကျဆုံးလွန်းတာကိုဆိုလိုတာ။) ဟိုတုန်းက အခုလို ဖေစ်ဘုတ်မရှိ ကင်မရာတွေ မပေါ များသေးတော့
မှတ်တမ်းတွေ မရခဲ့ကြဘူး။ စစ်တပ် ကျဆုံးမှုက လောက်ကိုင်ထက်ကို များခဲ့တယ်။
ကရင် နယ်မြေမှာမတိုက်ဘူးရင် စစ်သား လုို့ တောင်သတိူု့ အချင်းချင်း အသိမှတ်မပြု ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ကိုးကန့်မှာ စစ်တပ်မှ သေဆုံးစရင်း
၁။ ဗိုလ်မှုးကြီး (၄)ဦး
၂။ ဗိုလ်ကြီး (၉ )ဦး
၃။ ဗိုလ် အဆင့်. (၁၇)ဦး
၄။ ဒုဗိုလ်အဆင့်. (၂၃)ဦး
၅။ အခြားအဆင့်. (၅၂ )ဦး
၆။အောက်ခြေတပ်သား(၆၄၇)ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်။ အတွေ့ အကြုံ နည်းလှတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင် လှိုင် လက်ထက်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်စစ်ရေ
Posted by PNSjapan at 1:13 PM0comments
ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန် ဦးဆောင်သည့် ကေအဲန်ယူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ပန်ဆန်း ညီလာခံ တက်မည်
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုနော်စီဖိုးရာနှင့် ထိပ်ပိုင်း
ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့သည် လာမည့် မေလဆန်းပိုင်း ရှမ်း(သျှမ်း)
ပြည်နယ်၊ ၀ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအထူးဒေသ ပန်ဆန်း၌ ကျင်းပမည့်
တိုင်းရင်းသား ထိပ်သီးခေါင်း ဆောင်များ ညီလာခံသို့ ပါဝင် တက်ရောက်
သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီလ ၂၅ရက်နေ့က ပြီးဆုံးသွားသည့် ကေအဲန်ယူ
ဗဟိုအမြဲ တမ်းကော်မတီဝင်များ၏ အရေးပေါ်အစည်းအဝေး တွင် ဆုံးဖြတ်
ထိုညီလာခံသို့ တက်ရောက်ရန် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)
ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုနော်စီဖိုးရာအပြင် အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊
KNLA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘောကျော်ဟဲတို့ ဦးဆောင် သွားမည်
ဖြစ်ပြီး ပဒိုစောရောဂျာ ခင်၊ ပဒိုစောသမိန်ထွန်း၊ ပဒိုစောတာဒိုမူး၊ ပဒို
မန်းငြိမ်းမောင်နှင့် စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စောအိုင်းဇက်တို့က လေ့လာ
သူများအ ဖြစ် လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကေအဲန်ယူ ဖားအံခရိုင် လေးဝါး
စခန်း၌ ပြုလုပ်သည့် အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ် ဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့သည့် ကေအဲန်ယူ တောင်ငူခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ပဒို
စောအယ်ဝါးက “ပန်ဆန်းညီလာခံတက်ဖို့ ကိုယ်စား လှယ်ရွေးချယ်မှု အပေါ်မှာ
ကျေနပ်တယ်။ ဒါကြောင့် ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူကို ရွေးချယ်တာ တရားတယ်
လို့ ဆိုလိုတာပါ။ မတူ တဲ့အမြင်တွေ ရှိနေကြလို့ တွေးခေါ်မှု အယူအဆပေါ်
အခြေခံပြီး အချိန်ယူပြီး ရွေးချယ်ကြတာပါ။ ဒါ ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောချင် လည်း
ပြောလို့ရပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် ကေအဲန်ယူ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ဖားအံခရိုင် အတွင်း လေးဝါးစခန်းတွင် ဧပြီ ၂၀ရက်မှ ၂၅ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ၎င်းအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မူကြမ်း
(NCA draft) အချက်များအ ပေါ် ကေအဲန်ယူအနေဖြင့် မကျေလည်သေးသည့်
အချက်များကို အဓိကထားပြီး ပန်ဆန်းညီလာခံတွင် အကျေအလည် ဆွေးနွေး
ညီလာခံတက်ရောက်မည့် ကေအဲန်ယူ ဒု-ဥက္ကဌ ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က “(NCA )
ထဲမှာ ကျမတို့ဘက်က (၇)ချက်လောက် မကျေ လည်သေးတာ ရှိတယ်။ ဥပမာ
စာချုပ်ထဲက လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေမှာ အစိုးရ
ဘက်က နား လည်တာတစ်မျိုး၊ ကျမတို့ဘက်က နားလည်တာတစ်မျိုးပေါ့။ ကျမ
တို့အနေနဲ့က ဒီကိစ္စတွေကို သေသေချာချာ သဘောတူညီ ချက် မရှိသေးတဲ့
အပေါ်မှာ ပြန်ညှိဖို့ လိုတယ်။ ကျမတို့ဖြစ်စေ ချင်တာကတော့ အားလုံးလက်ခံ
နိုင်မှပဲ လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို လာ မယ့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုတွေမှာသာ ထည့်သွင်းဆွေနွေးစေချင်တယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းအပြင် KNU အနေဖြင့် ပန်ဆန်းညီလာခံတွင် လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ (NCA)မူကြမ်းကိစ္စများကို အဓိကထားကာ တိုင်း ရင်းသားများ အနေဖြင့် မည်သိုို့
ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သည့် အခြေအနေများကို အမြင်ချင်းဖ လှယ် ဆွေးနွေးသွားမည်
ဖြစ်ပြီး မကျေ လည်သေးသည့် အချက်(၇)ချက်ကို ပန်ဆန်းညီလာခံအပြီး
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ၏ ညီလာခံတွင် အသေးစိတ် ထပ်မံ ဆွေးနွေး သွားမည်
ဟု ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်က ဆက်ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသား ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ ညီလာခံကို မေလ ၁ရက်မှ ၃ရက် နေ့
အထိ ၀ နယ်မြေ၊ ပန်ဆန်းဒေသ၌ ကျင်းပရန် ရည် ရွယ်ထားပြီး ညီလာခံတက်
ရောက်ရန် ၀ ပြည်သွေးစည်း ညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP)က တိုင်းရင်းသား
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၁၂)ဖွဲ့ ကို ဖိတ်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
Posted by PNSjapan at 12:57 PM0comments
Posted by PNSjapan at 12:54 PM0comments
FUA အဖွဲ့ဝင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့ အစိုးရတပ်ကိုတိုက်မည်
FUA အဖွဲ့ဝင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့ အစိုးရတပ်ကိုတိုက်မည်...
Posted by Tam Kee on Monday, April 27, 2015
အစိုးရက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိင်ငံရေးအရမဖြေရှင်းဘဲ စစ်ရေးဖြင့်ဆက်တိုက်ခိုက်နေမယ်ဆိုလျှင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့အနေနဲ့ FUA တိုင်းရင်းသားများမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ အနေနဲ့မဖြစ်မနေ၀င်တိုက်ကူရမှာဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရကို ကိုအသိပေးလိုက်ပါပြီ..။
Posted by PNSjapan at 1:23 AM0comments
Posted by PNSjapan at 11:40 AM0comments
ဗမာဗိုလ်ချုပ်တချို့ရဲ့ ဝန်ခံချက်အရ ကိုးကန့်စစ်ဆင်ရေးမှာ အနဲဆုံး ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀၀) ကုန်ကျခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ မင်းရန်အောင်စစ်ဆင်ရေး၊ စီစီဝန်တာပန်စစ်ဆင်ရေး၊ မဲသဝေါစစ်ဆင်ရေး၊ မာနယ်ပလော စစ်ဆင်ရေးတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုများနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေပြန်သိမ်းရတာ၊ ကိုးကန့်ဒေသ တခုလုံးရဲ့ အကျယ်အဝန်း ၂% လောက်ဘဲရှိတဲ့တောင်ကြော ပြန်ရလိုက်တာနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် ငွေကုန်ရကျိုး၊ အရာရှိ ဆုံးရှုံးရကျိုး၊
Posted by PNSjapan at 10:22 PM0comments
ကိုးကန့်ဆိုတာ တိုင်းရင်းသား ဟုတ် မဟုတ် သေချာဖတ်ကြည့်...
ကိုးကန့်ဆိုတာ တရုပ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ငြိမ်းချမ်းရေးယူခိုင်းပြီး ကိုးကန့်အမည်ပေး နေရာ ချပေးလိုက်တာတဲ့ တကယ်တော့ ကိုးကန့်ဆိုတဲ့အမည်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တခုက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ကိုးကန့်တွေကိုနေရာချပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး၊
ကိုးကန့်ဆိုပြီးလူမျိုးစု အဖြစ် အဲဒီနေရာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်(၃၀၀)ကျော်ကထဲက ဖြစ်ထွန်းနေပါပြီ၊ မြန်မာဘုရင် ယိုးဒယား(ထိုင်း)ကို စစ်ချီတဲ့အခါမှာလည်း ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်း မှတ်တမ်းတွေ ရှိပါတယ် ၊မြန်မာဘုရင်တွေ လက်ထက်ကထဲက အခု တရုပ်လက်ထဲက ဆစ်ဆောင်ပန်နားနဲ့ အတူ လက်အောက်ခံ နယ်မြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဆစ်ဆောင်ပန်းနားဟာ တရုပ်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် တွေ ၁၈၈၆ ဇူလိုင်လ ပီကင်း ပထမဆုံး နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ် စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာလုပ်ပြီး တရုပ်ကိုပေးခဲ့တဲ့၊ ဗမာဘုရင်ပိုင်ရှမ်းနယ် ၁၂နယ်ပါဘဲ၊ အင်းဝခေတ် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွေကထည်းက ကိုးကန့်နယ်မြေကရှိနေပါပြီ။
၁၈၉၄မတ်လကြတော့ လန်ဒန်မှာတရုပ်နဲ့အင်္ဂလိပ် နယ်နမိတ် စာချုပ်ထပ်ချုပ်ပြီး တရုပ်က သူပိုင်တယ်ဆိုပြီး တောင်းတဲ့ ကိုးကန့်နယ်၊ ကျိုင်းတုံဖက်က ကျိုင်းဟုံးနယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်က မိုင်းလင်းနယ်တွေကို တရုပ်ကို ပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်၊
-ကိုးကန့်ဆိုတာ တရုပ်တွေကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်က ငြိမ်းချမ်းရေးယူခိုင်းပြီး ကိုးကန့်အမည်ပေးနေရာချပေးလိုက်တာတဲ့။
တကယ်တော့ကိုးကန့်ဆိုတဲ့အမည်ကို ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ကပေးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by PNSjapan at 10:20 PM0comments
မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၉-၁၀-၁၁-၁၂ ရက်တွေတုံးက သူ့တပ်တွေအထိနာသွားခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ဒေသမှာ တပ်ရင်း ၃၀ ကျော်ထပ်ဖြည့်သုံးနေပေမဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇-၂၈-မတ် ၁ ရက်နေ့ သုံးရက်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေမှာ တပ်မ ၃၃ လက်အောက်ခံ ခမရ ၁၁၁ နဲ့ ခမရ ၁၂၀ က အရာရှိ ၂ ယောက်အပါဝင် ၆၈ ယောက်ကျခဲ့တယ်။ မတ်လထဲမှာဘဲ ခမရ ၁၁၉ ကို လေတပ်ကမှားဗုံးကြဲလို့ ၈ ယောက်လောက် ကျသွားသေးတယ်။
ဗမာစစ်တပ်တွေ စုတ်ပြတ်သတ်အောင်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက် မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အခဲမကြေနိုင်ဘဲ ကိုးကန့်တပ်တွေကို အပြုတ်တိုက်မယ် အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းမယ် ကြွေးကြော်ပြီး ခြေလျင်တပ်မ တစ်မ ထပ်ပေးမယ်၊ လေကြောင်းပစ်ကူ၊ အမြောက်ပစ်ကူ လိုသလောက်ပေးမယ်လို့ တပ်မမှူး ကစထမှူးတွေကို ကတိပေးပြီး ကတိကိုဖြည့်ဆီးပေးနိုင်ဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေရရှာတယ်။
လောလောဆယ် ကချင်ပြည်မှာ တပ်မ ၉၉ နဲ့ တပ်မ ၁၀၁ ကိုထည့်ထားပြီး တပ်မ ၁၀၁ က ၂ ရင်းကို လောက်ကိုင် ပို့ထားရတယ်။ ဖားကန့်-ကာမိုင်းဘက်မှာတော့ ဖယ်ခုံက စကခ ၇ ကိုထည့်ထားတယ်။ တပ်မ ၇၇ နဲ့ တပ်မ ၈၈ က တော့ ပလောင်အဖွဲ့ TNLA ကို ဆိုင်ထားတယ်။ ဒီကြားထဲက တပ်မ ၈၈ နှစ်ရင်းကို လောက်ကိုင်ဘက် စစ်ကူသွား ခိုင်းပြီး တပ်မ ၉၉ ကတချို့ကိုလဲ ကွတ်ခိုင်လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုးကန့်အနောက်ဘက် သံလွင်ကူးတို့ဆိပ်တွေ ပိတ်ဆို့ရေး လုပ်ခိုင်းထားရတယ်။
တပ်မ ၃၃ မှာ ၆ ရင်းဘဲ ကိုးကန့်တပ်တွေကို တိုက်နေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနောက်မြောက်တိုင်း (နမခ) လက်အောက်ခံ ၂ ရင်းကို တပ်မ ၃၃ အောက်ထည့်ထားပေးလို့ ၈ ရင်းဖြစ်နေတယ်။ တောင်ဘက် ဝ နယ်စပ်ကို ထိန်းထားတဲ့ တပ်မ ၁၁ ဆီက ၃ ရင်းကို လောက်ကိုင်ဘက်ပို့ပြီး အားဖြည့်ပေးရတယ်။ သိန္နီ စကခ ၁၆ က ၆ ရင်းပို့ခဲ့တာ ခမရ ၅၂၂ ကတော့ တရင်းလုံးပြုတ်သွားလို့ ၅ ရင်းဘဲကျန်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကျောက်မဲ စကခ ၁ က ၃ ရင်း ထပ်ပို့ရတယ်။ မူလရှိနေတဲ့ ဒကစ(လောက်ကိုင်) လက်အောက်ခံ ၅ ရင်းမှာ ခလရ ၁၂၅ နဲ့ ၁၂၉ ရင်းလိုက်ပြုတ်သွားလို့ ၃ ရင်းဘဲကျန်တဲ့အတွက် အရှေ့မြောက်တိုင်း (ရမခ) တပ် ၂ ရင်း ဖြည့်ပေးထားရတယ်။
လက်ကျန်တပ်မတွေထဲမှာ တပ်မ ၅၅ က ကရင်နီပြည်မှာ ထိန်းထားရတယ်။ နောက်တန်းစောင့် ၂ ရင်းကျန်တဲ့ထဲက ခမရ ၁၈ ကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းက တပ်အသစ် ၂ ရင်းနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုးကန့်ဒေသကို ပို့ခိုင်းလိုက်ရတယ်။ KNU နဲ့ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေတယ်ပြောပြော ကရင်ပြည်၊ မွန်ပြည်တွေမှာ အခြေစိုက်တဲ့ တပ်မ ၂၂ နဲ့ တပ်မ ၄၄ တို့ကိုလဲ အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေကနေ အဝေးကို မသွားခိုင်းရဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ကရင်ပြည်က BGF တွေနဲ့ DKBA KNU တို့က ကိုးကန့်မှာ မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကသွားတိုက်မယ်လို့ စစ်လော်ဘီတွေ သတင်းလွှင့်တော့ တပ်မ ၂၂ နဲ့ ၄၄ အခြေ အနေကိုသိထားသူတွေအဖို့ ရယ်စရာဖြစ်နေတယ်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ် နဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတို့က နယ်မြေခံ စကခ တွေကလဲ ဒေသထဲက SSA-မြောက်ပိုင်း၊ SSA-တောင်ပိုင်း၊ KNU DKBA တို့ကိုထိန်းဖို့ ထားနေရတယ်။ ကကကြည်းအရံထားတဲ့ တပ်မတွေမှာ ရခိုင်ပြည်ဘက်က စကခ တွေကတော့ ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ပို့ဖို့ ဖယ်ထားရတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းက စကခ ၄ ကို တောင် ကရင်ပြည် ပို့ထားရသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကချင်ပြည်မှာ တနှစ်ကျော် ရှေ့တန်းတာဝန်ထမ်းခဲ့ရပြီး နောက်တန်းပြန်ရောက်တာ ၁၅ ရက်ကျော်ကျော်ဘဲ ရှိသေးတဲ့ တပ်မ ၆၆ တခုလုံးကို ကိုးကန့်နယ်ကိုပို့ပြီး တိုက်ပွဲပြန်ဝင်ခိုင်းလာရတယ်။ ၇ ရင်းကို ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ လောက်ကိုင်ပို့ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ ဗမာပြည်စစ်သမိုင်းမှာ လေကြောင်းချီစစ်ကူပို့မှု အများဆုံးအရေအတွက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကွတ်ခိုင်ကနေသံလွင်ကို ကုန်းလမ်းသွားခိုင်းတဲ့ ၃ ရင်းကတော့
Posted by PNSjapan at 10:06 PM0comments
တိုင်းရင်းသားလူငယ်တိုင်း မဖြစ်မနေ နားထောင်သင့်တဲ့ အင်တာဗျူး
တအာင်းလူငယ်တိုင်း မဖြစ်မနေ နားထောင်သင့်တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုပါ၊ ပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူ တာထဲမှာလည်း ဒေါင်းလော့ဆွဲပြီး သိမ်းဆည်ထားသင့်တဲ့ အင်တားဗျူးတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။DVB - ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း (၁)
Posted by Palaung State on Tuesday, April 14, 2015
တအာင်းလူငယ်တိုင်း မဖြစ်မနေ နားထောင်သင့်တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုပါ၊ ပြီးတော့ မိမိတို့ရဲ့ ဖုန်း၊ ကွန်ပြူ တာထဲမှာလည်း ဒေါင်းလော့ဆွဲပြီး သိမ်းဆည်ထားသင့်တဲ့ အင်တားဗျူးတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။DVB - ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း (၂)
၁၉၆၃ ခုနှစ်မှာ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းရဲ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ခေါ်ခဲ့တယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူထုအမြင်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့ပုံစံ လုပ်ပြခဲ့ပါတယ်။ လူထုနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး မဖြစ်ခဲ့သလို ဟန်ပြတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ ဦးခင်ညွန့်ကို အဓိကထားပြီး တပ်မတော်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေ ထပ်လုပ်ပါတယ်။ KNU ကလွဲလို့ အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ယူခဲ့ပါတယ်။ အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူခဲ့ကြတယ်။ တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နေရာချထားမှုအတွက် နှုတ်ကတိတွေ ပေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ပြန်တိုက်ကြပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံးကိုကြည့်ရင် အာဏာရှင်တွေက သူတို့အာဏာ ဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ခုတုံးလုပ်ခဲ့တာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ် ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း မပေးခဲ့ပါဘူး။
အခု သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သဘောတူညီချက်ရပြီလို့ ပြောလာပါတယ်။ အပစ်ရပ်ရေးအတွက် လက်မှတ်ထိုးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဖက်ဒရယ်ကို ဆွေးနွေးခွင့် ပြုထားတယ်။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန် ပြောလာတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုက ဘယ်လောက်ခိုင်မာနိုင်မလဲ။ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိလာပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NGO တွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေရပြီလို့ ထင်နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်၊ အီးယူ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျပန် အပါအဝင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ နိုင်ငံတွေက ထင်နေကြတာပါ။ လက်တွေ့မှာတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို နားလည်မှုမရှိသူတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
မတ် ၃၁ ရက်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် (NCA) မူကြမ်းရေးဆွဲပြီးစီးခြင်း မှတ်တမ်းကို ရန်ကုန်မြို့မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (MPWC) နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (NCCT) တို့ လက်မှတ်ထိုးခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ NCA ကို လက်မှတ်ထိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဆက်နွှယ်နေသူတွေ အလွန်အကျွံ ဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါတယ်။
သဘောတူညီချက် မူကြမ်းအတွက် မှတ်တမ်းတစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးတာကို NCA အပြီးသတ် လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အထင်ရောက်အောင် ဝါဒဖြန့်ခဲ့ကြတာပါ။
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အသေအချာ မသိသေးသူတွေအဖို့ အမြင်မှားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း အလွန်အကျွံ ဝါဒဖြန့်ရခြင်းအတွက် အဖြေရှိပါတယ်။
စက္ကူပေါ်က ရလာဒ် ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ထိုးခြင်းက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအတွက် အပူတပြင်း လိုအပ်နေတဲ့ အောင်မှတ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်းရေး လုပ်ငန်းဗဟိုဌာန (MPC) ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေက NCA လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ မထိုးခြင်းအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
ဒီအတွက် NCA အမြန်ဆုံး လက်မှတ်ထိုးနိုင်ဖို့ သူတို့ အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ် ၁ဝ ရက်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့ အစိုးရက စတင်ကြေညာပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေ မရပ်ဘဲ နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
လေးနှစ်တာကာလ ကြိုးပမ်းမှုရဲ့ နောက်ဆုံးရလာဒ်က မတ် ၃၁ ရက်မှာ NCA မူကြမ်းပါ အချက်အလက်တွေကို နှစ်ဖက် သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
အခန်း ၇ ခန်း၊ အပိုဒ် ၃၃ ပိုဒ်၊ အပိုဒ်ငယ် ၈၆ ပိုဒ်ပါရှိတဲ့ မူကြမ်းကို သဘောတူခဲ့တာပါ။ ဒီအချက်တွေကို သဘောတူပေမဲ့ ညှိနှိုင်းမရတဲ့ အချက်တွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒီ ညှိနှိုင်းမရတဲ့ အချက်တွေကို နောက်ပိုင်း ဆက်ဆွေးနွေးရန်ဆိုတဲ့ အချက်ထည့်ပြီး မူကြမ်းကို အပြီးသတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ ကျန်နေပါတယ်။
ပထမအချက်က တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ ကွဲလွဲနေတဲ့ မူပိုင်းဆိုင်ရာကို သဘောတူညီမှု မရှိသေးပါဘူး။ တပ်မတော်ဘက် သူတို့ရဲ့ အခြေခံမူ ခြောက်ချက်ကို ဆက်ကိုင်ထားသလို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေကလည်း လက်မခံကြောင်း ပြောထားပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်ဖြစ်တဲ့ DDR/SSR (လက်နက်ဖြုတ်ရေး၊ စစ်မှုထမ်းအဖြစ်မှ ရပ်နားရေး၊ တပ်များ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးနဲ့ လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး) ဆိုင်ရာတွေ အပြီးသတ် သဘောတူညီမှု မရသေးပါဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ခေါင်းစဉ်အောက် ပို့ထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အရေးကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ဘယ်လို ပုံဖော်မလဲဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတာ အခြေခံအားဖြင့် သဘောတူခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပုံစံဟာ အမျိုးသားညီလာခံပုံစံ ဖြစ်သွားနိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။ ဒါကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုမျိုး မရှိသေးပါဘူး။
ပြောရရင် အခုထွက်လာတဲ့ NCA မူကြမ်းဆိုတာ အခွံအဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က NCA ကို ဧပြီမှာ လက်မှတ်ထိုးဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အခု ရှိနေတဲ့ NCA မူကြမ်းကို NCCT ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ လက်ခံထားတာပါ။
‘ဝ’၊ မိုင်းလား၊ နာဂ အပါအဝင် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ (RCSS/SSA) တို့က NCCT အဖွဲ့
နယ်စပ်မှာ ဗုံးထိမှန်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသား ၅ ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရက တရားဝင် တောင်းပန်လိုက်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ကိုးကားပြီး တရုတ်သတင်းတွေ မှာဖော်ပြပါတယ်။...
တိုက်ပွဲတွေကတော့ တဂျိန်းဂျိန်းဆို လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ သူလည်း နောက်ကြောင်း မလုံဘူး
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ (UPWC ) နှင့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) တို့ အကြား ၃ နှစ်ကျော် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေသည့် တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ်(NCA) သည် လက်ရှိအခြေအနေ၌ မူကြမ်းအဆင့်တွင် အ...ချက်အလက်အားလုံးကို မတ်လ ၃၁ ရက်က ပဏာမ သဘောတူညီလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ မူကြမ်းကို သဘောတူညီလိုက်သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ NCA အပြီးသတ် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည့် အဆင့်များနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ပြီးပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေများ ကျန်နေသေးသည်။ ထိုအခြေအနေများကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် နန်းလွင်နှင်းပွင့်က NCCT အဖွဲ့ဝင် ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက်များမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
မေး။ ။ မတ်လ ၃၁ ရက်က လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာကို NCA ကို စာချုပ် အပြီးသတ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီလား ၊ ဘယ်လိုလဲဆိုပြီး ပြည်သူတွေ အကြား ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိတာတွေ ရှိပါတယ်၊ အခြေအနေ လေး ရှင်းပြပေးပါဦး ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ NCA ကို မထိုးပါဘူး၊ အခု လက်မှတ်ထိုးတာက NCA စာချုပ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သေးပါဘူး၊ အခု လက်မှတ် ထိုးလိုက်တာက မူကြမ်းပါ။ မူကြမ်းကို ရေးဆွဲတာက နှစ်ဖွဲ့ (UPWC နဲ့ NCCT) ရှိတယ်၊ မူကြမ်းရေးတဲ့ နှစ်ဖွဲ့က ဒါကျနော်တို့ရဲ့ ရလဒ်ပဲ၊ အခုရတဲ့ မူကြမ်းကို ကျနော်တို့ အတည်ပြုတယ်၊ နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာ လုပ်တဲ့မှတ်တမ်းပါ။ မှတ်တမ်းတခု အနေနဲ့ ကျနော်တို့ လက်မှတ်ထိုးတာပါ၊ NCA စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ စာချုပ်မူကြမ်း ရပြီဆိုတာရယ် နောက်နောင် ထပ်ပြီး စာချုပ်မူကြမ်းပါ
ဗမာစစ်သွေးကြွ မသာပုံများ မကြာမှီအချိန်အတွင်းမှာ တွေ့ရမည်
အကြီးအကဲများ ထမင်းတ၀ိုင်းထဲ အတူဆွဲနေကြ အချိန်မှာ နယ်ချဲ့သမား ဗမာစစ်သွေးကြွတို့ကတော့ ကိုးကန့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကို ဒီလို အပီအပြင် ဆော်နေ ပါတယ်။လက်နက်အင်အားမမျှပေမယ့် နယ်မြေပထ၀ီ အနေအထားကြောင့် ဗမာစစ်သွေးကြွဘက်မှ မသာပုံများကို မကြာခင်အချိန် အတွင်းမှာ တင်ပြပေးပါမည်။ မှတ်ချက် - မသာပုံများကို အကြောင်းပြ၍ ပိုက်ဆံတောင်းစားခြင်း၊ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းမှ သီးခံပါ။ :-P :-P
Posted by Kayan Times on Wednesday, April 1, 2015
မနေ့ က ကိုးကန့် ဒေသ လောက်ကိုင် နဲ့ချင်းရွှေဟော် ကြား တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အချက်အချာကျပြီး စစ်အစိုးရတပ်တွေအတွက် အဓိက ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွ...က် အင်အား အမြောက်အများ အသုံးပြုပြီး အဆိုပါ နေရာကို သိမ်းယူနိုင်ဖို့ ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ တပ်မ(၃၃ ) (၆၆) လက်အောက်ခံတပ်တွေ အလုံးအရင်း နဲ့ တက်လာပြီးတော့ တိုက်ခိုက်ပါတယ်။
လောက်ကိုင် ဒကစ စစ်တပ်ကုန်း နဲ့ဟိုပန် အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေပြီး ၁၂၀ မမ လက်နက်ကြီး နဲ့အဆက်မပြတ် ပစ်ပြီး ခြေလျင်တပ်တွေက အောက်ခြေက ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ယမန်နေ့ က တက်လာတဲ့ သံချပ်ကာ အမြောက်တပ်တွေကလည်း ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ထိခိုက်ကျဆုံး မှုကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး ။
Jade Land Kachin
ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများကို ချက်ခြင်းလွှတ်ရန် အမေရိကန် တောင်းဆို
ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများကို ချက်ခြင်းလွှတ်ရန် အမေရိကန် တောင်းဆို *****************************************************************************ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေပေါ် အကြမ်းဖက်ဖြိုးခွင်းမှု ဘက်မလိုက်ဘဲ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့နဲ့ ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ခြင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို အမေရိကန်က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ .Credit : DVB TV - 31.03.2015. ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်လေးစားလျက်Martin Swe31-03-2015
Posted by Martin Swe on Tuesday, March 31, 2015
တအာင်းဒေသသို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် တအာင်းတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
၂၀၁၅ မတ်လ ၂၈ ရက်
တအာင်းဒေသ၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမိုးညဲနှင့် မော်ဟန်ကျေးရွာကြားတွင် ယနေ့မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေ ၁၆း၀၀ နာရီမှ ၁၆း၃၀ နာရီ အချိန်ထိ တအာင်းတပ်မတော် ဗျူဟာ(၅) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၃၃၅)နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တိုက်ပွဲတွင် တအာင်းတပ်မတော်ဖက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမရှိပါ။ မြန်မာ့တပ်မတော်ဖက်မှ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုမသိရှိရသေးပါ။ တအာင်းဒေသ ဗျူဟာ(၅) လှုပ်ရှားနယ်မြေ အတွင်းသို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ စစ်အင်အား ထပ်မံ အင်အားဖြည့် ထိုးစစ်ဆင်ရာမှ နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်သည်။
" ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့်တစ်နုိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆုိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ တုို့၏ ပူးတွဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် "
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက် ရန်ကုန်မြို့
၁။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ (UPWC) နှင့် တစ်နုိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆုိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (NCCT) တို့အကြား တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) မူကြမ်း ရရှိနိုင်ရန် သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ဖက်ညှိနုိုင်း ဆွေးနွေးပွဲကုို မြန်မာနုိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းဗဟုို ဌာန (MPC) တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၇ မှ ၂၂ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ မတ်လ ၃၀ နှင့် ၃၁ ရက်များ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ နှင့် တစ်နုိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆုိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ တုို့၏ သတ္တမ အကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲ အပြီးတွင် အခန်း ၇ ခန်း၊ အပုိုဒ် (၃၃) ပုိုဒ် ပါ သဘောတူ စာချုပ် (အတည်ပြုမူကြမ်း)ကို နှစ်ဘက် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ဤဆွေးနွေးပွဲမှ ရရှိထားသော သဘောတူစာချုပ်(အတည်ပြုမူကြမ်း)ကုို ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ က ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟုိုကော်မတီသုို့ လည်းကောင်း၊ တစ်နုိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆုိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ က သက်ဆုိုင်ရာ တုိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ခေါင်းဆောင် များထံသုို့ လည်းကောင်း တင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ အတည်ပြုချက်များရယူပြီးနောက် တစ်နုိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ် တုိုက်ခုိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ကို တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထုိုးမည့် အချိန်၊ နေရာ နှင့် ပါဝင်လက်မှတ် ရေးထုိုးမည့်သူများ၏အမည်စာရင်းကုို နှစ်ဖက်ဆက်လက်ညှိနှိုင်း သတ်မှတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၅။ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ဆန္ဒနှင့်အညီ ရေရှည်တည်တံ့ ခုိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နုိုင်ရေးအတွက် နုိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ စတင်ကျင်းပနုိုင်ရန် နှစ်ဖက်မှ ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် အပ်ပါသည်။